SIDEE LOOGA TAKHALUSI KARAA BOODADA GURIGA SI DEGDEG AH OO MADAXBANNAAN: DAAWEYNTA QABOW IYO KULUL KULUL - GURI, GURI
Ka soo bax gurigaaga! Sidee looga takhalusi karaa baaskiilada gurigiisa si madax-bannaan iyo ka-qaybgalka adeegyo gaar ah
Qaylo-dhaan gudaha ah laguma tirin karo dadka la doonayo iyo kuwa faa'iido leh ee guriga!
Waxay dadka u weeraraan, qaniinaan, waxayna keenaan dhibaatooyin badan.
Dib u dhiciddooda burburintoodu maaha mid u qalma, sababtoo ah bukaan-socodka ayaa ku dhufan doona xawaare adag.
Sida loola dagaalamo?
Haddii gurigu leeyahay xayawaan guri, marka ugu horeysa ee aad u baahan tahay si aad u hesho dulin. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa habab kasta oo ku haboon: tan dhibco, qarxan, shaambo. Si loo ilaaliyo xayawaanku muddo dheer, waxaa habboon in la isticmaalo qoryaha. Waqtigeeda shaqeyntu waxay socon kartaa 1 ama 2 bilood.
Iyadoo la xayiray xayawaanka aad jeceshahay, tag diyaargarowga aqalka. Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo nadiifinta guud ee guud, oo laga tirtiro boodhka iyo wasakheynta dhammaan dhinacyada. Nidaamkani wuxuu daaweyn xiga u sameyn doonaa dawooyinka lidka-ka-boodka ah ee waxtar leh.
Haddii kiimikada loo doorto in ay joojiso dulin, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo nafsadda iyo xayawaanka rabaayada. Si taas loo sameeyo, waa in cuntada laga saaraa weelasha la xidho, oo lagu xidho qolalka iyo kabaha. Dabooli kari akkaariyaha oo dab damiya dab damiya hawada.
Dharka iyo gogosha waa in la qalajiyaa nadiifinta ama nadiifiya adiga.. Qaado busteyaal, barkimooyin, joodariyo iyo busteyaal waddada oo kululeeyo ama qaboojiso iyadoo ku xiran xilliga xiga. Roogga iyo roogga ayaa si fiican u nadiifiyay.
Guryaha ayaa riixaya bartamaha qolka, ka saar tuugada, roogaga, rinjiyeynta, albaabbada iyo qurxinta kale ee derbiyada.
Cayayaanka la xushay geeddi-socodka dhammaan deegaannada boodhka ee suurtogalka ah, oo fiiro gaar ah u leh cayayaanka. U hubso inaad ka gudubto alwaaxyada alaabta guriga, roogaga, ku buufin isku xirka gidaarka, farqiga dhulka, gawaarida, albaabka guriga iyo albaabka.
Guriga ka tag, wakhti adag, xidh si daaqadaha oo dhan. Markuu soo noqodo, si fiican u qalaji dhismaha si alaabadu u dhammaato oo aan waxyeelo u geysan reerka.
Ka hor inta aanad dib ugu soo noqonin alaabta garoonka, qaado nadiifinta qoyan. Si loo hubiyo in sunta cayayaanka la dhaqo, ku dhaqi saabuun kasta biyo iyo ku dar soodhada soodhaha ama baking soda. Kaliya qalabka noocaas ah ayaa ka saari kara dhammaan raadadka kiimikooyinka.
15-19 maalmood kadib, waa inaad mar labaad ku celisaa tallaabooyinka waxqabadka., sida ugu badan sunta cayayaanka casriga ah ma laha hantida qoyan. Sidaa awgeed, ukunta la dhigay ayaa marka hore u noqon doonta dirxiga, ka dibna ku ridaya dulinka dadka waaweyn. Si aad uga takhalusto jiilka cusub ee dhiig-miirayaasha iyo u baahan tahay in dib-u-shaqeyn lagu sameeyo burburka.
Waxaa jira siyaabo badan oo looga takhalusi karo qolalka aan la rabin.
Waxay ka kooban tahay isticmaalka kiimikooyinka burburiya cayayaanka. Habka ugu fiican uguna dhakhsaha badan. Qulqulka, aerosols, diirada emulsion iyo qalfoofka ayaa loo isticmaalaa ka hortagga dhiigga.
MUHIIM! Faa'iidooyinka habkan waxaa ka mid ah kharashka dhaqaalaha iyo khatarta ah in ay sumoobaan dadka iyo xayawaanka rabaayadda ah.
Habka ugu waxtar badan ee looga takhaluso boodada.
Shaqaalaha adeegyada gaarka ah Isticmaal qalabyada ugu awoodda badankuwaas oo loo ballan qaaday in ay burburiyaan cayayaanka marxaladaha oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, habkani waa kan ugu qaalisan ee shuruudaha maaliyadeed.
Waa la soo gabagabeeyay marka la isticmaalo heerkul aad u sarreeya ama heerkul hooseeya.
Noocyada noocan oo kale ah ee lagu keydiyo dhismaha, daaweynta feerada ama qiiqa, boodhka biyaha karkaraya ayaa loo isticmaalaa ka hortagga dulinka. Biyaha karkaridda waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya tiro yar oo dulin ah oo ogaanaya meesha ay ku nool yihiin.
Xilliga qaboobaha waxaa suurtogal ah in la qaboojiyo guriga. Daaweynta qiiqa ee kulul ama qabow waxaa loo aqoonsan yahay habka jirka ee ugu waxtar badan.
Isticmaalida daaweynta dadweynaha
Badbaadada, laakiin sidoo kale habka wax soo saar yar. Waxaa badanaa looga golleeyahay in laga saaro boodhadhka guriga, oo aan la burburin. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku dabooshaa dhirta adiga oo uraya wax xun: qadhaadh, burka duurjoogta ah, toonta, calamus, Tansy, miraha liinta. Dabcan, maaliyaddan ma saameyneyso ukumaha dhammaantood.
Waad ku dili kartaa boodada oo kaliya oo leh budada pyrethrum (Dalmatian Chamomile). Waxaa lagu kala firirsan yahay tuubooyinka iyo degaannada dhiig-miirayaasha iyo natiijo wanaagsan ayaa la filayaa dhowr toddobaad. Daroogadu waxay leedahay kharash aad u hooseeya iyo badbaado buuxda ee dadka kale.
Akhri wax badan oo ku saabsan hababka caanka ah ee maqaalka.
Si aad u isticmaasho habkan, waxaad u baahan doontaa koronto-dhaliye. Qiiqa kulul waxaa laga soo saari karaa xalalka aqueous ee cayayaanka, heerkulkiisu wuxuu gaaraa 65-75 °.
Dhibcaha ugu yar ee biyaha ayaa meel kasta ku dhex yaal, waxaana lagu balan qaadayaa inay gaaraan guryaha qarsoon ee dulin.
Marka la eego saameynta heerkulka sare, shaqada walxaha sunta ah waxay u socotaa si xoogan.
DAREEN! Daaweyntani waxay burburin doontaa dhammaan cayayaanka ku nool dhismaha, oo ma ahan boodhka kaliya, waxay yareeyn doonaan fungi, jeermiska cudurada pathogenic iyo caaryar.
Cold Mist generator waxay ku shaqaysaa mabda'a isku mid ahSi kastaba ha noqotee, way ka fogtahay qalabka wax ka qabta cayayaanka. Sababtan darted, qaybaha biyaha ayaa yar yar. Waxay ku xiran yihiin hawada muddo dheer, sumeynaya cayayaanka. Guryaha la deggan yahay, kuleyliyeyaasha qabow-gubta ayaa loo isticmaalaa. Kumbaha kulul waxaa loogu talagalay goobaha aan deganeyn.
Dabaqa dabiiciga ah ayaa ugu nugul weerarrada boodada ku nool dhulka hoostiisa. Si aad uga takhalustid dulinada oo aad naftaada ilaaliso mustaqbalka, waa inay si taxadar leh u xiraan dhamaan godadka iyo meelahataasoo keenta qolalka qoyan. Mesh aad u badan ayaa lagu dari karaa daloolka.
Waxaa sidoo kale lagugula talin karaa in lagu baari karo dhammaan saldhigyada. sunta cayayaanka si ay u dejiyaan dulin. Si taas loo sameeyo, waxaad codsan kartaa shirkadda maamulka. Codsiga wadajirka ah ayaa dardargeli doona nidaamka.
Guri gaar ah?
Boodhadhka Earthen ee ka soo galaya guryaha laga soo galo waxaa inta badan loo isticmaalaa halkan. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto meel kasta!
Caymiska Mordant ee dhismaha waxaa lagama maarmaan ah in la kala saaro dhirta ama budadataas oo ka hortagi doonta in lagu dhex daro dulinka cusub ee gudaha. On site dhulka waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo wax kasta oo qashinka organic in waqti, geedo abuurka leh cayayaanka, waxaa lagu talinayaa in lagu buufin ciidda leh karbofos ama chlorophos.
Sidee loola carari karaa bisadaha guriga?
Nidaamku waa mid aan ka duwaneyn in laga takhaluso noocyada kale ee boodada. Just in meesha ugu horeysa ee ka mid ah kuwa dulin ah waxay u baahan yihiin inay sii daayo gudbiye ah ee karbaash, taas oo ah, bisad. Tani waxay abuurtay qalab badan oo kala duwan.
Dhibco. Waxay u baahan yihiin in lagu daboolo maqaarka caleenta, iyagoo horay u soo jaray furihii hore. Dhibco macquul ah sida Stronghold, Hartz, Leopard, Advantage;
Shamboo. Isticmaal keli ah xayawaanka jecel dabbaasha. Had iyo jeer si buuxda uma yareynin xakamaynta, inta badan waa in dib loo isticmaalo ama lagu daro habab kale. Shaamboonada ugu wax ku oolka badan waa RolfClub, Mr. Kiss, Phytoelite, Barsik, Lugovoy;
Daboolka. Ma aha oo kaliya damaanad qaadista boodada, laakiin sidoo kale ilaalinta xayawaanka muddo dheer ka soo kabashada;
Boogaha. Dhibaatada ku dulsaarta dulinka ku dhawaad ​​markiiba, laakiin waxyeello u leh xayawaanka. Si aanad u sumoobin xayawaankaaga, waa inaad si taxadar leh u ilaalisaa dhammaan talaabooyinka badbaadada. Noocyada ugu caansan waa Hartz iyo Front Line.
Taas ka dib, waxaad sii wadi kartaa daaweynta dhismaha qalab kasta oo la soo xulay. Diirad gaar ah waa in la siiyaa qashinka bisadaha. (waxay ka fiican tahay inaad tuurto oo aad ku bedesho mid cusub) iyo meesha xayawaankaaga ku badan tahay.
Haddii uu jiro ilmo ku jira guriga?
Jawaabtu waa sahlan: waxaad u baahan tahay inaad doorato hababka ugu nabdoon dadka! Xalka ugu fiican wuxuu noqon doonaa budada pyrethrum.. Xitaa haddii ilmuhu helo oo dhadhamiyo, isagu ma xanuunsan doono! Pyrethrum waa sunta kaliya ee cayayaanka, jirka ku jira xayawaanka diiran ee dhiigga ku jira, waxay si dhakhso ah u jajabisaa ficilada fiyuusyada mana keenayso waxyeelo.
Helitaanka boodada guriga, ha ka baqin ama quusto! Cuntada si habboon loo xushay oo ay weheliso ciriiri iyo saxnaantu waxay kaa caawineysaa si dhakhso ah iyo kharash la'aan khaas ah si looga takhaluso duulaanka dulin..
Waa maxay isticmaalka iyo sida loo sameeyo pickles ka soo kaabajka ee jiilaalka
Waa maxay sifooyinka bogsashada ee ubaxa, caleemaha iyo qaybta cad acacia cad? Talooyin loogu talagalay isticmaalka iyo ka hortagga
Waraabka faleebo ee aqalka dhirta lagu koriyo: Nidaamka waraabka oo si toos ah, hababka waraabinta, qalabka iyo qalabka
Raadi qallajinta of pear ah jiilaalka at guriga foornada iyo qallalan koronto
Sida loo isticmaalo sifooyinka bogsashada ee miro-dhoosyada daawada dhaqameed
Waad ku mahadsan tahay jiilka hiwaayadda sannad walba foomamka isku dhafan oo kala duwan oo canab ah muuqan. Qaar ka mid ah waa mid gaar ah oo si deg-deg ah u noqda kuwa loo yaqaan "winegrowers". Mid ka mid ah noocyada kuwan waa "furor", taas oo ay la socoto qadarkeeda aan caadiga ahayn ku faraxsan yahay dhammaan bannaanka u. Read More
Waxaanu soo saarnaa guryaha qurxinta Ardiziya Krenat
Ku dar nalalka kaydka: wax walba oo ku saabsan diyaarinta basbaas kulul